Militariga Sudan oo joojiyey wadahadalkii kuna baaqay Doorasho Guud • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Militariga Sudan oo joojiyey wadahadalkii kuna baaqay Doorasho Guud
Militariga Sudan oo joojiyey wadahadalkii kuna baaqay Doorasho Guud
June 4, 2019 - By: Axmed Muuse
Hogaamiyaha Golaha Militariga Sudan Gen.Abdelfatah Al-Burhan Ayaa sheegay inay gebi ahaan laaleen qodobadii ay horey kula heshiiyeen ururada mucaaridka & Rayidka isagoo sheegay in la joojiyey wadahadaladii, wuxuuna sheegay in la qaban doono dhawaan doorasho guud.
Khudbadan Gen. Al Burhan oo subaxnimadii Salaasada laga baahiyey telefishinka dowlada ayaa lagu soo beegay kadib rabshadihii Isniintii shalay ka dhacay magaalada caasimada ah ee Khartuum, ururada rayidka ayaa sheegay in militariga ay rasaas ku fureen dadka mudaharaadka wada waxaana dhimashada la sheegayaa inay gaareyso ugu yaraan 35 ruux, halka dhaawaca uu gaarayo boqolaal.
Al Burhan ayaa warka uu soo saaray ku sheegay inay ka xun yihiin dhibaatooyinkii ay shalay militariga geysteen, wuxuuna sheegay in ay qaban doonaan doorasho 9 bilood kadib.
Kahor warka kasoo baxay militariga ayey qaar kamid ah ururada rayidka iyo kooxaha mucaaridka ee banaanbaxyada waday sii sheegeen inay joojiyeen wadahadalkii ay kula jireen militariga, iyagoo sidoo kale sheegay inay bilaabi doonaan shaqo-joojin iyo waliba mudaharaadyo horleh.
Militariga Sudan ayaa gebi ahaan bedalay qaabkii ay ulla dhaqmayeen shacabka, waxayna hada u muuqdaan kuwo awood doonaya inay ku caburiyaan kacdoonka dalkaasi ka socda, waxaana la sheegay in hogaanka militariga go’aankan qaatay kadib markii uu Taliyaha ciidamada iyo kuxigeenkiisa ay dhawaan dib uga soo noqdeen booqasho ay ku tageen dalka Sacuudiga iyo Imaaraatiga.
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa inuu kulan deg deg ah ka yeesho xaalada dalka Sudan, iyadoo ay isa soo tareyso cambaareynta Beesha Caalamka ee ku aadan awooda uu militariga Sudan u adeegsanayo shacabka doonaya in dalkaasi laga dhiso dowlad rayid ah.